Facebook မှာ Password ကို Reset | Facebook မှာ Password ကိုပြောင်းလဲနည်း
December 19, 2019 အားဖြင့် HOTMAIL255aComment ချန်ထား
သင် ... လုပ်ချင်ပါသလား Facebook မှာ Password ကိုပြောင်းလဲပါ သို့မဟုတ်သင် Facebook မှာ Password ကိုမေ့လျော့? ထိုအခါမစိုးရိမ်, ဒီနေရာမှာငါအဘို့အပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါပြီ. အလွယ်တကူဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်ရသောအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားရှိပါတယ် Facebook မှာ Password ကို Reset.
ဤဆောင်းပါးသည်များအတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြသပါလိမ့်မယ် Facebook မှာ Password ကိုပြောင်းလဲနည်း. လူတိုင်းလွယ်ကူစွာ၎င်းတို့၏ password ကိုနားလည်ပြီးပြောင်းလဲပစ်နိုင်အောင်သင်ဒီမှာတွေ့ပါပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းခြေလှမ်းပုံစံအားဖြင့်တစ်ဦးခြေလှမ်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်.
သင့်အနေဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးနားလည်ရန်အလွန်ဂရုတစိုက်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါရန်ရှိသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုခြေလှမ်းတဆင့်သွားပြီးအောင်မြင်စွာမှသူတို့ကိုနောက်ကိုလိုက် Facebook မှာ Password ကို Reset. တိုက်ရိုက်က်ဘ်ဆိုက်မှ redirect ဖို့ခြေလှမ်းတွေအတွက်တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ link ကိုဖော်ပြထားခြင်းကိုသုံးပါ.
Facebook မှာ Password ကိုပြောင်းလဲပါ | အဆင့်အပြီးအစီးလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့်
ရန်ဒီမှာပြည့်စုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထုတ်စစ်ဆေး Facebook မှာ Password ကိုပြောင်းလဲပါ. ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းခြေလှမ်းကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်.
ပဌမ, ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ထည့်သွင်း: www.facebook.com
ယခု, သင်၏ Email သို့မဟုတ်ဖုန်းနှင့်စာနယ်ဇင်းရိုက်ထည့်ပါ “လော့ဂ်အင်”.
ယခု, ယင်းအပေါ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ “မေ့လျော့သောစကားဝှက်”.
ယခု, ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို reset မှသုံး options များကြည့်ရှု.
ကြှနျုပျ၏ Google အကောင့်ကိုသုံးပါ.
SMS ကိုမှတဆင့်ကုဒ် Send.
ထို option နှင့်စာနယ်ဇင်းပုကို Select လုပ်ပါ “ဆက်လက်” code ကိုလက်ခံရရှိရန်.
ယခု, အဆိုပါလက်ခံရရှိသင်ရရှိထားသည့်ကုဒ်နှင့်စာနယ်ဇင်းရိုက်ထည့်ပါ “ဆက်လက်”.
ယခု, သစ် password နဲ့စာနယ်ဇင်းရိုက်ထည့်ပါ “ဆက်လက်”.
သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာ Facebook မှာ Password ကိုပြောင်းလဲပါ.
ကြီးသုံးပါ, စာလုံးအသေး, တောလည်ရာ, နှင့်အထူးဇာတ်ကောင်သင့်ရဲ့ Password ကိုဖန်တီးပါမှ. Facebook က၌ရှိသကဲ့သို့, သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများထားကြပြီ. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုလုံခြုံစေရန်ခိုင်ခံ့သော Password ကိုအောင်တကယ်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးနဲ့ပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်များအားငါပေးမည် Facebook မှာ Password ကိုပြောင်းလဲနည်း. အဆင့်များဖတ်ရန်နှင့်အောင်မြင်စွာမှသူတို့ကိုနောက်ကိုလိုက် Facebook မှာ Password ကို Reset. အကယ်. သင်က Facebook မှာ Password ကိုမေ့လျော့ သို့ဖြစ်လျှင်ဤဆောင်းပါးကိုအလွယ်တကူအသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုကူညီပေးပါသည်.
သင်ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများရှိသည်ရင်တောင်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်အောင်ထို့နောက်ဖော်ပြထားခြင်းမှတ်ချက်အကွက်အောက်ရှိသုံးပြီးဝေမျှ. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www-hotmail-com.email မှန်မှန်ပိုပြီးမွမ်းမံမှုများအတွက်.
အောက်မှာ Filed: လျှို့ဝှတ်နံပါတ်အားမူလအတိုင်းပြန်လုပ်သည် အတူ Tagged: facebook password ကိုအပြောင်းအလဲ, facebook password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ, သင့်ရဲ့ facebook password ကို reset